Ra'isalwasaare Gaas oo Galkacyo ka dhoofay & heshiiskii Puntland & DKMG (Document) – SBC
Ra'isalwasaare Gaas oo Galkacyo ka dhoofay & heshiiskii Puntland & DKMG (Document)
Raa’isalwasaaraha dawlada KMG Soomaaliya Dr. Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas) ayaa soo gabagabeeyey socdaalkii uu ku joogay deegaanada Puntland, isagoo soo marey magaalooyinka Garoowe, Burtinle & Gaalkacyo.
Cabdwali Gaas ayaa saaka ka ambabaxay magaalada Gaalkacyo isagoo halkaasi ku sugnaa laba maalmood waxaana uu booqdey Koonfurta Magaalada wuxuuna kula kulmay madaxda maamul goboleedka Galmudug oo uu ugu horeeyo Madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Axmed Caalin & masuuliyinta kale ee maamulkaasi.
Dhinaca kale Ra’isalwasaaruhu wuxuu sidoo kale kula kulmay Gaalkacyo Madaxda maamulka Gobolka Mudug ee Puntland & duqeyda dhaqanka oo uu ka mid yahay Islaan Bashiir Islaan Cabdulle.
Ra’isalwasaaraha tukushadii salaada ciida wuxuu Talaadadii isaga & wafdigiisu kala qayb galeen dadka degmada Burtinle ee gobolka Nugaal halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey.
Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa saaka si weyn looga sii sagootiyey magaalada Gaalkacyo waxaana diyaarad gaar ah ay ka qaadey garoonka Gaalkacyo isaga & wafdigiisa waxaana ay u ambabaxeen magaalada Muqdisho ee caasimada wadanka.
Dhinaca kale codsi fara badan oo dhanka e-mailada & teleefonada oo naga soo gaarey akhristayasha website-ka SBC Online ayaan u soo gudbinaynaa nuqul ka mid ah heshiiskii rasmiga ahaa ee ay wada gaareen dawlada KMG Soomaaliya & Puntland kaasi oo ay qalinka ku duugeen Madaxweyne Faroole & Ra’isalwasaare Gaas, heshiiskaasi ka aqriso hoos.
Deeqo Nuur Faarax(Billan)